गर्लफ्रेण्ड संगको ब्रेकअप पछि अधिक शारीरिक सम्बन्ध बनाएका कारण बिरामी भएका थिए यी हलिउड कलाकार
हलिउडका चलेका कलाकार विल स्मिथ आफ्नो बायोग्राफीका कारण सामाजिक सञ्जालमा छाईरहेका छन् । स्मिथले आफ्नो बायोग्राफीमा दाबी गरेका छन् कि गर्लफ्रेण्ड संग ब्रेकअप भए पछि यस्तो समय आएको थियो उनको जिवनमा उनी हरेक पटक धेरै महिलाहरु संग सम्बन्ध बनाएका कारण बिरामी नै परेका थिए ।
विल स्मिथको यो किताब यस महिनाको सुरुआतमै रिलीज भएको थियो जसमा यी कलाकारले आफ्नो याद तथा अनुभव शेयर गरेका छन् । किताबमा स्मिथले लेखेका छन् कि– एक मेलानिई नामकी केटी जो संग १६ बर्षको उमेरमा रिलेशनसिप टुटे पछि मैले धेरै जना संग सेक्सुअल रिलेशन बनाउन थाले । ब्रेकअप मेरो लागि एकदमै असहनिय भएको थियो ।
त्यसपछि मैल धेरै महिलाहरु संग शारीरिक सम्बन्ध बनाउन थाले । यसका कारण मलाई साइकोमेटिक डिसअडर बिकसित भयो । सेक्स गरिरहेको बेला कयौ पटक मलाई उल्टी हुने गथ्र्याे । उनले आफ्नो अनुभव लेख्दै भनेका छन्– मलाई राहतको सख्त जरुरी रहेको थियो । किनकि मेरो दिल टुटेको थियो यसको कुनै दबाई थिएन ।
मैले शपिंग तथा ठुलो मात्रामा सम्बन्ध बनाउनका लागि सेक्सलाई उपचारको सहारा बनाए । उनले आफनो गर्लफ्रेण्ड हुन्जेल उसै संग मात्र सम्बन्ध बनाएको तर ब्रेकअप पछि आफु पुरै बिरक्तिएर धेरै जना संग सम्बन्ध बनाउन थालेको बताएका छन् ।
२ – २ वटा वच्चाकी आमा बनिसकेकी करिनालाई फेरी पनि पत्याए यि निर्देशकले, को हुन् उनी ?
करिनासँग हिँडेर आफ्नी आमालाई धोका दिएका बाबु सैफसँग कस्तो छ साराको सम्बन्ध ?
यस्तो अबतारमा देखा परिन अक्षरा सिंह
सुनिल सेट्टीका छोरा अहानको चलचित्र ‘तडप’को दोस्रो ट्रेलरलाई सर्वाधिक रुचाइयो
यसकारण अमिताभ बच्चनको ‘केबीसी’ बिबादमा
भोली शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरा डिस्चार्ज हुने भएपछि तत्काललाई टर्यो…
यस्ता छन् बेथेको सागका अपत्यारीला फाइदै फाइदा जसको सेवनल…
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको वार्षिकोत्सव प्रज्ञा सम्मेलनमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति…
२ – २ वटा वच्चाकी आमा बनिसकेकी करिनालाई फेरी…
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको त्रास बढेसँगै अब यी ११…
दिउसो भन्दा रातको समयमा यसकारण बढी रुन्छन् बच्चा